module လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > module လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် dတစ်ဦးmper တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion.AOX-R ကို ကို စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် ကျယ်ပြန့် သက်ဆိုင် သို့ ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စက္ကူ ချမှတ်ခြင်း, စွမ်းအား စက်ရုံ, အပူ, အလင်း စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် အခြား စက်မှုလုပ်ငန်း။ AOX လိမ့်မည် အောင် ကြီးမားသော ပံ့ပိုးမှုများကို သို့ အဆိုပါ အနာဂတ် နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ထုတ်ကုန်, အသစ်က နည်းပညာ နှင့် ဆက်လက်နေသော cusသို့mer ဝန်ဆောင်မှု, နှင့် ကြိုးစား သို့ ဖြစ်လာသည် တစ်ဦး globတစ်ဦးl leတစ်ဦးder တွင် vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion စက်မှုလုပ်ငန်း တွင် အဆိုပါ 21 ရာစု။
S2 စံ, 30 မိနစ်
1. Compact ဒီဇိုင်း: လေးပုံတပုံပြောင်းလဲပစ်အသေးစား, အလင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း, မြင့်မားသော torque နှင့် AOX-R ကိုစီးရီး၏အမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ် option ကိုလျှပ်စစ် actuator လှည့်သင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။
2. သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအဖုံးတုံး: ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းမူလီဆုံးရှုံးကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဆိုပါမူလီ waws ။
3. နျ Standard4န့်သတ်ချက် switches များ: အပြည့်အဝ cloased များအတွက်အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်2န့်သတ်ချက် switch ကို2န့်သတ်ချက် switch ကိုပေး။
4. Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝကို: Precise ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ AOX-R ကိုစီးရီးများအတွက်မြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုသေချာလေးပုံတပုံပြောင်းလဲပစ်လျှပ်စစ် actuator လှည့်။
လေးပုံတပုံပြောင်းလဲပစ် AOX-R ကိုစီးရီး၏ Module Module ရဲ့လျှပ်စစ် actuator turn ပြင်ပ installation ကိုချမှတ်နှင့်ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့ပိုကောင်းတက်တွင်စတင်။ ဒါဟာ actuator အများဆုံးအပူချိန် 120 âနှင့်မော်ကျူးများ၏အီလက်ထရောနစ်ဒြပ်စင်အပူချိန်သာ70âသောဆန့်ကျင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အားနည်းသောလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ် power supply မတည်မငြိမ်လယ်ကွင်းဗို့ကြောင့် module ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည်မဟုတ်။ အရည်အသွေး။ မည်သည့်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုတုန်ခါမှုအခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်သေချာဖို့ module ကို fix ။
စက်မှုhandleï¼ Handwheel optional ကိုï¼ဖြစ်ပါသည်
hot Tags:: module လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်